Dib u dhac ku yimid jadwalkii doorashada | KEYDMEDIA ONLINE
Dib u dhac ku yimid jadwalkii doorashada
Dib u dhac ayaa ku yimid jadwalka doorashoyinka, kadib markii lagu fashilmay in ay maanta bilaabato soo xulidda iyo diyaarinta ergada doorashada, oo qorshuhu ahaa in ay maanta dhaqan gasho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Golaha Wadatashiga Qaranka ayaa dhamaadkii bishii hore soo saaray Jadwalka doorashooyinka Soomaaliya, kaas oo soo idlaan doona 10 October 2021, oo ku beegan doorashadda Madaxweynaha JFS.
Tan iyo xilligaas, waxaa lagu guuleystay hirgalinta mid ka mid ah todobo qodob oo lagu heshiiyay, kaas oo ah tababarka iyo doorashada Guddoonka Guddiyada Doorashooyinka oo loo asteeyay (30 June – 05 July 2021).
Hayeeshee, jadwalka ayaa u muuqda in ay wax badan iska badali doonaan, maadaama maanta oo ah 15 July loo madlanaa in ay bilaabato soo xulidda iyo diyaarinta ergada doorashada mana muuqato wax tallaabo ah oo ilaa hada la qaaday.
Inkastoo la xaliyay inta badan arrimaha la xariira guddoonka doorashooyinka, hadana guddiga maamulaya doorashada Xildhibaanada Soomaaliland, ayaa kala jabay, waxa ayna kala doorteen labo guddoomiye, tallaabadaas ayaana sida muuqata qeyb ka qaadatay dib u dhaca jadwalka doorashooyinka.
Dhanka kale safarkii uu Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, ku tagay Kismaayo iyo Garbahaarray, ayaan u mira dhalin sidii la filayay, waxaana wali dhicin dib u heshiisiin la isku af-gartay in Rooble hoggaamiyo.
Kaliya Siddeed maalmood ayaa ka dhiman xilligii lagu heshiiyay in ay diyaar ahaadaan Goobaha Codbixinta Doorashada (23 July 2021), halka ay 10 maalmood ka harsan tahay xilligii la qorsheeyay in ay billaabato Doorashada Aqalka Sare (25 July 2021).